iGladAfrica Championship Archives - Impempe
Category: iGladAfrica Championship
Sihle Ndlovu USakhile Hlongwa, weRichards Bay FC, uthi ufuna ukuqhubeka nokuhlohla amagoli njengoba iqembu selizodlala kwiDStv Premiership ngesizini ezayo. INatal Rich Boyz ibe ngompetha beGladAfrica Championship, yaphakamisa indebe ngesonto eledlule, eKing Zwelithini Stadium, eMlaza. UHlongwa […]
Leave a commentiGladAfrica Championship
May 22, 2022 May 22, 2022 Impempe.com
OkaDonga Gumbi Umlando uvele uvuna iSwallows FC njengoba izoqala imidlalo yokuhlungela ukuthi iyabuyela yini kwiDStv Premiership noma iya ehlathini. ISwallows izodlala namaqembu asuka kwiGladAfrica Championship i-University of Pretoria neCape Town All Stars emidlalweni yokuhlunga ezoqala […]
May 20, 2022 May 20, 2022 Impempe.com
Sihle Ndlovu IRichards Bay FC ayisoze ithengise isitifiketi sayo sokudlala kwiDStv Premiership. Lokhu kuqinisekiswe usihlalo weqembu ophinde wachaza ukuthi isimo sokudayiswa kweThanda Royal Zulu. INatal Rich Boyz inyukele kwiPremiership kulandela ukudla umhlanganiso kwiGladAfrica Championship. “Ayidayisi […]
Leave a commentiDStv Premiership, iGladAfrica Championship
UMajavu uthi akukho cala elizophazamisa ukusongwa kweligi kulokhu
OkaDonga Gumbi Umshushisi wePremier Soccer League (PSL) uZola Majavu useveze ukuba nethemba elikhulu lokuthi isizini izosongwa kahle kulokhu kungekho amacala alengayo. Phela isizini ephelile yathi iphela kwakukhona abagijimisana ezinkantolo ngenxa yamacala ayengakapheli iakjhulukazi leli leRoyal […]
Ujabule uJomo weBay kanti kumnyama kuJomo weCosmos
Sihle Ndlovu Ukusongwa kweGladAfrica Championship ka-2021/2022, kuze nenjabulo kuJomo Biyela ongusihlalo weRichards Bay FC, kwase kuba ukukhala nokugedla kwamazinyo kuJomo Sono, usihlalo weJomo Cosmos. INatal Rich Boyz yenze uBiyela walala ejabule ngeSonto ngesikhathi iba ngompetha […]